Windows ကို 10 Cracked က ISO - အားလုံးတစ်ဦးကအပြည့်အဝအကြို activated လို့ Torrent အတွက် - Softkelo - Unlimited ဆော့ဖ်ဝဲများရှာပါ, ဒါကိုတော့ & hack
နေအိမ် » ပရီမီယံ Cracked » Windows ကို 10 Cracked က ISO – အားလုံးတစ်ဦးကအပြည့်အဝအကြို activated လို့ Torrent အတွက်
Windows ကို 10 Cracked က ISO – အားလုံးတစ်ဦးကအပြည့်အဝအကြို activated လို့ Torrent အတွက်
အားဖြင့် softkelo | စက်တင်ဘာလ 11, 2017
Windows ကို 10 Cracked က ISO သင်တစ်ဦး Cracked က ISO ကိုရှာဖွေနေကြသည်အနည်းငယ် minutes.If ၌သင်တို့၏ပြတင်းပေါက်ကိုသက်ဝင်စေရန်ကူညီပေးသည်ထို့နောက်သင် W ကဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ညာဘက်ရာအရပျမှာindows 10 activated က ISO SoftKelo ကနေအခမဲ့အဘို့.
Cracked Windows ကို 10 ISO ကို နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်ဝန်ကိုချဖြည့်စွက် 32-64 နည်းနည်း. Windows ကို 10 seasoned တည်ဆောက် 10240 သင်တို့အဘို့အချောင်ဝန်ကိုချကဒီမှာ. သငျသညျအိမ်မှာပြတင်းပေါက်များအတွက်အရာရှိတဦးက iso ကို download လုပ်ပါစေခြင်းငှါ 10. ချက်ချင်း link ကိုငါ့အအင်တာနက်စာမျက်နှာဖျ Kelo မှာရှိခဲ့ခြင်းကိုခံရဖို့ဖြစ်တယ်. SoftKelo အထူးနှင့်အသစ်တချို့အရာဖြန့်ဖြူးကြောင်းလူသိများအက်ကွဲဆော့ဗ်ဝဲပရိုဂရမ်အင်တာနက်စာမျက်နှာအကြားတစျခုဖွစျသညျ.
Windows ကို Download လုပ်ပါ 10 Cracked က ISO
Windows ကို 10 Cracked က ISO
Windows ကို 10 အကြို activated ယနေ့ခေတ်အများဆုံးနားလည်လွယ်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံအားလုံးအိမ်မှာပြတင်းပေါက်၏အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာမိုင်နီးပါးနေအိမ်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုရောနှောခြင်းနှင့်အစားထိုးမယ့်7manipulate မှတောက်ပစေနိုင်ပါတယ်ရာအနည်းငယ်လုံးဝအသစ်သောစွမ်းရည်များနှင့်နေအိမ်ပြတင်းပေါက်ရှစ်. အဆိုပါအသုံးပြုသူများကိုလုံးဝမထောက်ပံ့ကြေးအိမ်ပြတင်းပေါက်များကတတျနိုငျသ. သင်ဟာရှာဖွေနေကြသည် Preactivate အခမဲ့ယနေ့ Download ပြုလုပ်.
Windows ကို 10 အားလုံးတစ်ခုမှာခုနှစ်တွင် ကို run ဖို့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဟာ Laptop နဲ့လိမ္မာပါးနပ်တယ်လီဖုန်းပေါ် handiest မရှိသေးပေ, စဉ်ဆက်မပြတ်အဆောက်အဦများ, Xbox One, မူးယစ်ဆေးဝါးများ, မျက်နှာပြင်အချက်အချာနှင့်အပေါက်မှန်ဘီလူး. တစ်ဦးတတ်နိုင်ပြီးသန့်ရှင်းတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်, ငါသည်ဤသစ်ကိုထုတ်ဝေထားတဲ့တစ်ခုလုံးကိုအပေါ်ချိန်ညှိထားပြီးကြောင်းသင်ပြောပြချင်ပါတယ်, အရပ်အများဆုံးထဲမှာအချို့ကိုသင်အဟောင်းအင်္ဂါရပ်ခံစားရမယ်လို့သော်လည်း. ဒါပေမဲ့, ဤအယခင်စွမ်းရည်တစ်ခုတိုးလာထိတွေ့ပေးထားပြီ.
သငျသညျဒါ့အပြင်လိုနိုင်ပါစေ: Sketchup Pro ကို 2016 အက်ကွဲ - Free Download 2016 လိုင်စင် Key ကို + အမှတ်စဉ်နံပါတ်
မှ Windows ကို 10 Preactivated လို့ Torrent သငျသညျအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသစ်တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကိုရလိမ့်မယ်. ငါအတွက်စားသုံးသူဗျာဒိတ်ကျမ်းစကားပြောသည့်အခါ, ဒီအဆင်အပြင်ကထပ်ပြောသည်, ခြုံငုံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်၎င်း၏စွမ်းရည်. ရိုးရှင်းစွာ W ကခစျြတဲ့သူတစ်ဦးကနိုင်ငံတကာချစ်သူများအသိုင်းအဝိုင်းကြောင်းကိုအိမ်ပြတင်းပေါက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစီအစဉ်ကိုindows 10 အပြည့်အဝက ISO.
ဖောက်သည်များနှင့် operating system ကိုလုံခြုံရေးအဖြစ် သာ. ကြီးမြတ်အကွာအဝေးပါဝင်ပတ်သက်နေသည်နှင့်အမျှ, အိမ်မှာပြတင်းပေါက် 10 ဝါရင့်စာရေးကဒီတည်နေရာနှင့် ပတ်သက်. စိတျဆိုးပုံရသည်. အဲဒီမှာတပ်လှန့်နေသောလူများအတွက်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာကဆက်ပြောသည်အလုံအလောက်သူတို့ရဲ့စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းအတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အကာအကွယ်. bitlocker ဒီ Element တစ်ခုရဲ့ဖြစ်ပါသည်, အရေးပါဖိုင်တွေအတော်လေးသဘာဝဆော့ဗ်ဝဲနဲ့သူတို့ကိုစာဝှကျကို အသုံးပြု. comfy သိမ်းဆည်းထားစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်. ဝေးသင့်ဆာဗာများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအပြန်အလှန် PC ရဲ့ technique ကိုမှ device ကိုကွန်ပျူတာ၏အပွငျ, ထိန်းချုပ်မှုပေါင်းစပ်, ဒိုမိန်းအိမ်မှာပြတင်းပေါက်၏ခြွင်းချက်စွမ်းရည်၏နံပါတ်ရှိပါသည်မှတပါးတစ်ဦး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ် 10 ဝါရင်
သငျသညျပြတင်းပေါက်ချင်အဘယ်ကြောင့် 10 ဝါရင့် iso?
မူလစာမျက်နှာပြတင်းပေါက် 10 အိမ်မှာပြတင်းပေါက်ရှစ်များအတွက်အစားထိုးဖြစ်ပါသည်. Microsoft ကရိုးရာလက်ပ်တော့ရန်၎င်း၏အာရုံကိုနောက်ကျောအောက်ပိုင်းတစ်ဦးဒီဇိုင်းနှင့်အတူတွက်ချက်ထားပြီး menu နဲ့လျင်မြန်စွာတိုးတက်မှု web browser ကိုစိတျအပိုငျးကိုစတငျ. အဆင့်မြင့်မြင့်ကို virtual လက်ထောက်လည်းရှိပါတယ်, Cortana, မေးခွန်းများကိုအတူသင်တို့အကြံပေးနှင့်သင့် Laptop ကို personalize မှ.
Windows ကို 10 အဆက်အသွယ်မော်နီတာများအတွက်ထိုနည်းတူခြွင်းချက်ဖြစ်ပါသည်, သင့်ရဲ့ device ကိုကိုက်ညီဖို့ကိုအထူးပြုထားတဲ့ interface ကိုနှင့်အတူ. သငျသညျလက်ရှိနေအိမ်ပြတင်းပေါက်၏အသုံးပြုမှုဆိုရင် 8 သို့မဟုတ်အစောပိုင်းက, ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေတ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်အဆောက်အဦများ၏နောကျခေတ်ပြိုင်မျိုးဆက်အတွက်ဗျာဒိတ်ကျမ်း. W က Downloadindows 10 အားလုံးတစ်ဦးက ISO လို့ Torrent ခုနှစ်တွင် ယနေ့အခမဲ့.
မူလစာမျက်နှာပြတင်းပေါက် 10 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသေးများအတွက်လျှောက်လွှာအထုပ်ဖြစ်ပါသည်, အလတ်စားနှင့်အကြီးအကျယ်စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု. ကျနော်တို့အောက်စာရင်းပြုစုမယ်သောဤဗားရှင်းနဲ့ဆက်စပ်အနည်းငယ်ပုံမှန်မဟုတ်သောစွမ်းရည်ရှိပါတယ်.
သင့်ရဲ့ဖိုင်တွေကို encrypt လုပ် bitlocker.
Virtualization ၏အဘို့ remote desktop ထိန်းချုပ်မှု.
တိုတောင်းသောကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု updates များကိုပေါ်လက်မထပ်ရသေးကလစ်.
အဆိုပါနေရာတွင်အစားထိုးပြတင်းပေါက်အဘို့အထွက်လည်းမရှိ 10 အိမ်မှာပြတင်းပေါက်မှဝါရင် 10 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဗားရှင်း.
တန်ချိန်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သော.
တစ်ပြတင်းပေါက်ဒေါင်းလုတ်လုပ်လုပ်နည်း 10 iso file ကို
ပဌမ, လူအပေါင်းတို့၏ချွတ်, သငျသညျကိုဆင်းအောက်ခလုတ်ကိုဝန် link ကို click နှိပ်ပြီးနဲ့ Microsoft ရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်မှာယခုခလုတ်ကိုနှိမ့်ချဝန် device ကိုစံချိန်တင်မှာပါ / faucet အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
mediacreationtool.Exe ဖိုင်မှတ်တမ်းပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါနှင့်သင့် Laptop ကိုအဘို့ကိုစောင့်ရှောက်, ထိုသို့ execute.
တစ်ဦးနည်းလမ်းများ UAC UAC ခြင်းဖြင့်လာအောင်နှိုးဆွပါလျှင်, ဟုတ်ကဲ့အပေါ် / faucet အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
လိုင်စင်စာပိုဒ်တိုများများအတွက် button ကို ယူ. ဖြန့်ဝေအပေါ် / faucet ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ.
ကို set up mode ကိုထွက် Pick
အဆိုပါ PC များအတွက်အားပေး option ကို uncheck
အဆိုပါ iso စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ရှေ့ဆက်ခွငျးငှါအလိုရှိ
သငျသညျထို့ပြင်ယင်း product key ကိုရိုက်ထည့်ပါစေခြင်းငှါ
← Sketchup Pro ကို 2016 ရိုက်သံ – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် 2016 လိုင်စင် Key ကို + အမှတ်စဉ်နံပါတ် အားလုံး Ip Crack Hide – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်အပြည့်အဝ Activation Key ကို + serial Keygen →